पशुपती शर्माको नयाँ गित ‘कल्ले कान फुक्यो र ?' सार्वजनिक (भिडियो सहित)
साधारण तारेखमा छुटे निर्माता छविराज ओझा ।
रुखमा किन पोतिन्छ रातो र सेतो रङ्ग ? कारण यस्तो ।
नक्क'लि बिवाह गरेर अष्ट्रेलिया जाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो
कमला घिमिरेको दमदार अभिनय रहेको ‘वान टु वान टु’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित )
यसरि मनाए रणबिर र दिपिकाले “एनिभर्सरी” हेर्नुहोस तस्बिरसहित
2019-11-14 2019-11-14 admin
मुम्बइ : चर्चित बलियुड का स्टार रणबिर सिंह र दिपिका पादुकोण ले पहिलो एनिभर्सरी मनाएका छन् ! उनीहरुले आफ्नो पहिलो बिवाह वर्ष गाठ तिरुमाला मन्दिरमा धुमधाम का साथ् मनाएका हुन् ! उनीहरुले मन्दिर मा खिचेका तस्बिरहरु सामाजिक संजाल हरुमा भाइरल बनिरहेका छन् ! उनीहरुका सुभचिन्तक र उनीहरुका समर्थक हरुले उनीहरुलाई तस्बिर पोस्ट गर्दै एनिभर्सरी को बधाई तथा सुभकामना दिएका छन् ! तस्बिरमा दीपिका वेहलीले लगाउने सारी र गहनामा सझिएकी देखिन्छिन् । रणवीर भने परम्परागत कुर्तामा थिए । स्थानीय मिडियाका अनुसार दीपिकाले लगाएको उक्त सारी उनले परिवारकै सदस्यबाट उपहारमा पाएकी हुन् ।सामाजिक…
काठमाडौँ। नेपाली सीमा अति’क्र’मण गरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएपछि अहिले देशभर यसको विरो’ध भइरहेको छ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेक सम्मलाई भारतले समेटेर नक्सा बनाए पछि नेपाली नागरिकले विरो’ध गर्दै नक्सा सच्याउन माग गरेका छन् । यसैक्रममा धेरै कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले पनि फेसबुकमा आफ्ना बिचारहरु राखेका छन् । यस्तै चर्चित हास्य कलाकार कुमार कट्टेल जिग्रीले आफ्नो फेसबुकमा मातृभूमिको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो भन्दै एक तस्बिर शेयर गरी स्टाटस लेखेका छन् ।तस्बिरमा उनी नेपाल भारत सीमा स्तम्भमा ह’तियारसहित उभिएका छन् । नेपाल भारत सीमा स्तम्भमा हतियारसहित उभिएर…
काठमाडौँ । चर्चित मोडल तथा नायिका आँचल शर्माको विवाहको कुरा लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेकी छिन् । अभिनेत्री आँचलले केही समय पहिले आफू डा. उदिप श्रेष्ठ सँग गहिरो प्रेममा रहेको खुलाएकी थिइन् । करिब १ बर्षअघि एक कार्यक्रममा भेटपछि नजिकिदएका नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठको प्रेम अहिले गहिरो छ । एक वर्ष देखिको चिनजान र प्रेमलाई यी दुवैले अब विवाहमा परिणत गर्देछन् । नायिका आँचलले हालै एक मिडियामा आगामी फागुनमा बिहे गर्ने फाइनल भएको बताएकी छिन् । आगामी फागुनमा बिबाह गर्ने तयारीमा भए पनि कुन दिन बिबाह गर्ने…
कार्तिकमै बेहुला बेहुली बने दुर्गेश र बिनु शाक्य (तस्बिर सहित)
काठमाडौँ । युवा पुस्ताका ढुकढुकी रहेका चर्चीत गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा र बेली डान्सरले परिचित रहेकी मोडल विनु शाक्य फिचर्ड रहेको नयाँ म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन सकिएको छ । भिडियोलाई चर्चित लोकप्रिय डान्सर मोडल तथा निर्देशक शङ्कर बिसीले निर्देशन गरेका छन् । जस्मा दुर्गेश थापा र विनु शाक्यलाई दुलहा दुलहीको रूपमा देख्न पाइने भएको छ । विवाहको महिना अर्थात् मङ्सिर नजिकिँदै गर्दा विवाह सम्बन्धित गीतको भिडियोहरु बजारमा धमाधम सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ । थुप्रै चर्चित गीतहरूमा अभिनय गरेर सबैको मन जितेकी मोडेल तथा बेली डान्सर विनु शाक्यले दुर्गेश थापा सँग सँगै…
सास्त्रकाअनुसार यी ३ राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई पहिलो भेटमै फिदा बनाउँछन् । जानिराखौ
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ राशि हुने गर्दछन् । यी १२ राशि अनुसार व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र पनि फरक हुने गर्दछ । राशि अनुसार भविष्य, स्वभाव, चरित्रलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । यस्ता कतिपय राशि पनि छन् जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई सजिलै आकर्षण गर्न सक्ने शक्ति दिएको हुन्छ । आज हामी तपाइहरूलाई ती राशिको बारेमा बताउनेछौ जुन राशि भएका युवती देखेर पुरुषहरू फिदा हुने गर्दछन् । हेरौँ ती राशिहरू वृष राशि वृष राशि हुने युवतीको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । पहिलो भेटमै पुरुषहरू यी राशिका युवतीप्रति आकर्षित हुने गर्दछन्। यो…
बलेरो जिप दुर्घ’टना एकको मृ’त्यु तिन घा’इते
प्युठान । प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिका ४ कोलवांग भिरमा बिहान बलेरो जिप दुर्घ’टना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने तिन जना ग’म्भीर घा’इते भएका छन् । भिङ्गीबाट स्वर्गद्वारीतर्फ जाँदै गरेको ग १ च ५२४९ नम्बर बलेरो गाडी सडकबाट ३ सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृ’तकको सनाखत हुन सकेको छैन । चालक सहित ग’म्भीर घाइते ३ जनालाई थप उपचारको लागी भैरहवा ल्याउँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ । घट’नाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । घट’नाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै रहेको…
बुलबुल ।शास्त्रका अनुसार सबै गरी राशिहरू १२ वटा मात्र हुन्छन् । विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरूको राशि अनुसार उनीहरूको भाग्य, क्षमता र व्यवहार फरक फरक हुने गर्दछ । त्यसैमा पनि कोहीको बौधिक क्षमता धेरै हुन्छ भने कसैको कम पनि हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक फरक राशिका व्यक्तिमा व्यवहार, भाग्य फरक हुन्छ ।केही यस्ता ५ राशिहरू छन् जुन राशि भएका मानिस जीवनमा कहिले हार मान्दैनन् । उनिहरू आफ्नो जीवन बाट कहिले पनि हार खादैनन् र आफ्नो लक्षको लागी कडा मिहेनत गर्ने गर्दछन् । हेरौँ उक्त पाँच राशि तल कर्कट: कर्कट राशि भएकाले…
अष्ट्रेलियाका सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषाको विषय पनि पढाइने । तीन वटा विद्यालयमा सुरु भयो अध्यापन ।
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाका सरकारी स्कुलमा नेपाली भाषाको अध्ययन/अध्यापन गराइने भएको छ । अस्ट्रेलियाका दुई राज्यले नेपाली विषयलाई आफ्नो सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन् । अहिले न्यु साउथ वेल्सका दुई र दक्षिण अस्ट्रेलियाका तीन सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषा ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन सुरु भएको हो । बहु सांस्कृतिक देशका रूपमा चिनिएको अस्ट्रेलियाले आफ्नो सरकारी पाठ्यक्रममा विद्यार्थी तथा विद्यालयको रुचिअनुसार अन्य देशका भाषा समेट्ने गरेको छ । सोही क्रममा नेपालीको धेरै बसोबास रहेको न्यु साउथ वेल्स राज्यको सिड्नीस्थित कोग्राह पब्लिक स्कुल र रकडेल पब्लिक स्कुल तथा दक्षिण अस्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्रका प्लेफोर्ड इन्टरनेसनल…
2019-12-10 admin 0
सागको भव्य समापनमा जब आकाशमा देखियो बुद्ध र नेपालको नक्सा (तस्बिर सहित)
काठमाडौँ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को मङ्गलवार भव्य कार्यक्रमबिच समापन गरिएको छ । काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा समापनको भव्य समारोह आयोजना गरिएको थियो । समापन कार्यक्रममा विभिन्न झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो भने सुरक्षाकर्मीहरुले विभिन्न नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण भनेको आतिशबाजी र...
काठमाडौँ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को मङ्गलवार भव्य कार्यक्रमबिच समापन गरिएको छ ।...
2019-12-11 admin 0
पशुपती शर्माको नयाँ गित ‘कल्ले कान फुक्यो र ?’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ / आफ्ना हरेक गीतमा नयाँपन दिने लोकप्रिय लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका...
2019-12-09 admin 0
लाहुरे बने नेपाल आइडल पहिलो सिजनका प्रतिस्पर्धी निशान भट्टराई…
काठमाडौँ / नेपाल आइडलको पहिलो सिजनमा प्रतिस्पर्धी भएर आम संगीत प्रेमी दर्शकहरूको माझ लोकप्रिय भएका निशान...
2019-12-08 admin 0
‘प्रेम गीत ३’ मा यस्ता देखिए अनुभव रेग्मी र प्रदीप खड्का…
काठमाडौँ / फिल्म ‘प्रेम गीत ३’मा नायक प्रदीप खड्काको बाल्यकाल भूमिका निवार्ह गरेका अनुभव रेग्मीको क्यारेक्टर...